DHEGEYSO-Taliska booliska Puntland oo si kulul uga hadlay ammaan darrada Galkacyo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Taliska booliska Puntland oo si kulul uga hadlay ammaan darrada Galkacyo.
Luulyo 10, 2016 12:07 b 0
(July 10 2016)-Ku-simaha taliyaha ciidanka booliska ee dowladda Puntland Cabdulqaadir Shire Faarax (Ereg), oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in amni darada ka jirta Magaalada Gaalkacyo aysan ka dambeyn Al-Shabaab oo kaliya laakiin ay jiraan dano ku hoos duugan.
General Ereg ayaa ugu baaqay shacabka magaalada Boosaaso inay ammaankooda adkaystaan haddii aysan qaban dadka ammaan darrada wada ama aysan ciidanka u sheegina guryohooda lagala wareegi doono oo ay magaalada marti ku noqon doonaan.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Xarunta Galkacyo 10 07 2016.